The Buddha (BC 623-BC 543) : ရှိခိုးဦးချပုံ ဦးချနည်း by- Myoma Myint Kywe သမိုင်းပညာရှင် မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
Researched by- Myoma Myint Kywe သမိုင်းပညာရှင် မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
ဘုရားနှင့် သံဃာတော်တို့ထံ ဆည်းကပ်ရှိခိုးသောအခါ ရိုသေစွာ လက်အုပ်ချီပြီးနောက် “နီး၊ ဝေး၊ ရှေ့၊ နောက်၊ မြင့်မောက်၊ လေညာ” ဟူသော အပြစ်ခြောက်မျိုးလွတ်သော နေရာ၌ နေ၍ ရှိခိုးပြီး လျှောက်ထားဖွယ် စကားတို့ကို လျှောက်ထားရမည်။
လျှောက်ထား နာယူပြီးလျှင် ရှိခိုးဦးချ၍ ပြန်ရမည်။ ပြန်သောအခါ ဘုရားရှင်နှင့် သံဃာတော်တို့ကို ကျောပေး၍မပြန်ဘဲ လက်အုပ်ချီကာ လေးငါးလှမ်းခန့်
(၂) နူတ်ဖြင့် ရွတ်ဆို ရှိခိုးခြင်း (၀စီဝန္ဒနာ)၊
ဒူးနှစ်ဘက်၊ လက်နှစ်ဘက်၊ နဖူးတို့ကို မြေ၌ သို့မဟုတ် ကြမ်းပြင်၌ ထိစေ၍
ရှိခိုးခြင်းသည် ထိခြင်းငါးပါးနှင့်အညီ ရှိခိုးသည် မည်၏။
ဆောင်ပုဒ် ။ ။ ခြေ လက် နဖူး၊ တံတောင် ဒူး၊ ငါးဦး မြေထိစေ။
လမ်းတွင် ရဟန်းသံဃာတော်တို့ကို တွေ့ဆုံသောအခါ ဦးထုပ် ဖိနပ်ချွတ်၍
ခြေစုံရပ်ကာ လက်အုပ်ကို ဦးထိပ် ၌ တင်လျက် ကိုယ်ကို ရှေ့သို့ ညွတ်ကာ ရှိခိုးရမည်။
အမျိုးသားဖြစ်လျှင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျက်၊ အမျိုးသမီးဖြစ်လျှင် ကြုံ့ကြုံ့ထိုင်လျက် ထိခြင်းငါးပါးနှင့် အညီ တုပ်ဝပ်လျက် ရှိခိုးရမည်။
ဘုရားရှိခိုးသောအခါ ဦးစွာပထမ ဦးချရမည်။ ဦးချသောအခါ -
ဗုဒ္ဓံ ပူဇေမိ = ဗုဒ္ဓံ - မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပူဇေမိ - ပူဇော်ပါ၏ အရှင်ဘုရား။
ဓမ္မံ ပူဇေမိ = ဓမ္မံ - တရားတော်မြတ်ကို၊ ပူဇေမိ - ပူဇော်ပါ၏ အရှင်ဘုရား။
သံဃံ ပူဇေမိ = သံဃံ - သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကို၊ ပူဇေမိ - ပူဇော်ပါ၏ အရှင်ဘုရား။
ဟု ဆို၍ ဦးချရမည်။
(မှတ်ချက်။ ။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားတော် အခြေခံအဆင့် စာအုပ်မှ ထုတ်နုတ်ဖော်ပြထားသည်။)
Prostration (叩头, Kowtow)
A prostration (叩头 , Kowtow) isagesture used in Buddhist practice to show reverence to the Triple Gem (comprising the Buddha, his teachings, and the spiritual community) and other objects of veneration.
Gadot (ကန်တော့) isaBurmese verb referring toaBurmese tradition in whichaperson, always of lower social standing, pays respect or homage toaperson of higher standing (including Buddhist monks, elders, teachers and Buddha), by kneeling before them and paying obeisance with joined hands, and bowing. This is usually done by students to their teachers or children or grandchildren to their elders (parents, aunts, uncles and grandparents), in order to show gratitude and reverence and an opportunity to ask for forgiveness, often involving gift-giving.
Prostration isageneral practice in Buddhism. Kowtow, which is borrowed from kau tau in Cantonese, or koutou in Mandarin Chinese, Gadot (ကန်တော့) in Burmese, is the act of deep respect shown by prostration, that is, kneeling and bowing so low as to have one's head touching the ground. An alternative Chinese term is ketou, however the meaning is somewhat altered: kou has the general meaning of knock, whereas ke has the general meaning of "touch upon (a surface)", tou meaning head.
Theravada Buddhists executeatype of prostration that is known as "five-point veneration" or the "five-limbed prostration" where the two palms and elbows, two sets of toes and knees, and the forehead are placed on the floor. More specifically:
... In the kneeling position, one's hand in Anjali (palms together, fingers flat out and pointed upward) are raised to the forehead and then lowered to the floor so that the whole forearm to the elbow is on the ground, the elbow touching the knee. The hands, palm down, are four to six inches apart with just enough room for the forehead to be brought to the ground between them. Feet are still as for the kneeling position and the knees are aboutafoot apart...
Three prostrations infer deep respect for Buddha’s teachings. By performing three full prostrations, one expresses his/her intention to adhere to The Three Jewels - the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Likewise, the act symbolizes the discarding of the Three Poisons - hatred, ignorance and excess.